Rainwear House (Myanmar) Manufactory Ltd. – Posted by Rainwear House – Anywhere
Rainwear House (Myanmar) မိုးကာအင်္ကျီချုပ်စက်ရုံမှ အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိပါသည်။
	စာရင်းကိုင် (ကျား/မ)	–	(၁) ဦး
အလုပ်ချိန်	–	တနင်္လာမှ သောကြာ (နံနက် ၈း၀၀ မှ ညနေ ၅း၀၀)
–	စနေ (နံနက် ၈း၀၀ မှ နေ့လည် ၁၂း၀၀)
စိတ်ပါဝင်စားသူများ ကာလာဓာတ်ပုံ (၄) ပုံ၊ မှတ်ပုံတင် မူရင်း/မိတ္တူ၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာမူရင်း၊ ရဲစခန်းထောက်ခံစာမူရင်း၊ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မူရင်း၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ (သို့) ဧည့်စာရင်းမိတ္တူဖြင့် အောက်ပါလိပ်စာသို့ (နံနက် ၈း၀၀ မှ ညနေ ၁၂း၀၀) လူကိုယ်တိုင် လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
အမှတ် (၁၂၀)၊ ဦးတရုတ်ကြီးလမ်း၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၂)၊ (၈၉) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ် – 09965139618
Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Job Tags: accounting and factory. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 26 days.